Football Khabar » ९ महिनापछि रोनाल्डो पोर्चुगलको टिममा, धमाधम प्रशिक्षण ! (फोटो फिचर)
९ महिनापछि रोनाल्डो पोर्चुगलको टिममा, धमाधम प्रशिक्षण ! (फोटो फिचर)
एजेन्सी, चैत ६
सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो पोर्चुगलको राष्ट्रिय टोलीमा फर्किएका छन् । उनी मंगलबारबाटै टिममेटसँगै राष्ट्रिय टोलीमा प्रशिक्षण गरिरहेका छन् ।
रोनाल्डो सन् २०२० मा हुने युरो कप प्रतियोगिताको छनौट खेलका लागि ९ महिनापछि राष्ट्रिय टोलीमा फर्किएका हुन् ।
३४ वर्षीय इटालियन क्लब युभेन्टसका फरवार्ड रोनाल्डोलाई पोर्चुगलका प्रशिक्षक फर्नान्डो सान्तोषले केही समयअघि राष्ट्रिय टोलीमा डाकेका थिए । रोनाल्डोले रसिया विश्वकपपछि पहिलोपटक राष्ट्रिय जर्सीमा युरो कप छनौटअन्तर्गत सर्बिया र युक्रेनविरुद्ध खेल्नेछन् ।
पोर्चुगलले आगामी शनिबार आफ्नो घरमा युक्रेनसँग पहिलो खेल खेल्दैछ भने मंगलबार आफ्नै घरमा सर्बियासँग खेल्दैछ । पोर्चुगल छनौट चरणमा समूह ‘बी’मा परेको छ ।
रोनाल्डो पछिल्लोपटक रसिया विश्वकपयता टोलीमा फर्किएका थिएनन् । रसिया विश्वकपमा उनको टोली पोर्चुगल अन्तिम १६ मा उरग्वेसँग पराजित हुँदै बाहिरिएको थियो । विश्वकपमा रोनाल्डोले व्यक्तिगत रूपमा उच्च प्रदर्शन गर्दै ४ गोल गरेका थिए ।
त्यसयता पोर्चुगलले विभिन्न प्रतियोगिता गरेर विभिन्न ६ खेल खेल्दा रोनाल्डो टोलीमा थिएनन् । त्यसबीचमा उनले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान क्लब युभेन्टसमै लगाएका थिए । उनी रसिया विश्वकपपछि रियल मड्रिड छाडेर युभेन्टसमा अनुबन्ध भएका थिए । त्यसयता उनी पहिलोपटक राष्ट्रिय टिममा फर्किएका हुन् ।
रोनाल्डोको टिमले आगामी जुलाई ६ तारिखमा युइएफए नेसन्स लिगमा सेमिफाइनल खेल पनि खेल्दैछ । सो खेलमा पोर्चुगलले स्वीट्जरल्यान्ड र अर्को खेलमा नेदरल्यान्ड्सले इंग्ल्यान्ड प्रतिस्पर्धी पाएको छ ।
मंगलबार पोर्चुगलका डिफेन्डर जुआन कान्सेलोले रोनाल्डो आफूहरूका लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण खेलाडी रहेको बताए । ‘क्रिस्टियानोजस्ता खेलाडीले जुनसुकै टिमलाई शक्ति र आधार दिन्छन् । उनीसँग खेल्न पाउनु ठूलो कुरा हो । र, उनी हाम्रा लागि धेरै महत्त्वपूर्ण खेलाडी हुन्,’ कान्सेलोले मंगलबार मिडियासँग भने ।
प्रकाशित मिति ५ चैत्र २०७५, मंगलवार १७:४८